Shanta madaxweyne ee ugu taajirsanaa Mareykanka |
Shanta madaxweyne ee ugu taajirsanaa Mareykanka
Dalka Mareykanka oo ah kan ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa madaxweynayaashii soo maray waxay ahaayeen kuwo dabaqadda noolashooda y kala duwaneyd.
Qaar kamid ah waxay xilka qabteen iyagoo leh hanti ama kasoo jeedaa qoys hanti leh, halka kuwa kalena ay ka yimaadeen qoysas aan waxba heysanin.
Warbaahinta Fox News ee dalka Mareykanka ayaa warbixin ka qortay shanta madaxweyne ee ugu hantida badnaa ee qabtay hogaanka dalkaasi.
Madaxweyne Donald Trump waxaa xafiiska loo doortay sanadkii 2016-ka, xilligaas oo uu ku guuleystay doorashadii Mareykanka ee uu kula tartamay Hillary Clinton.
Hantida madaxweyne Trump ayaa gaareyso 3.1 bilyan oo dollar, marwalbana waxa uu sheegaa sid auu ku helay lacagta iyo in uu yahay shakhsi aad uga guul gaaray ganacsiga dhismaha dhulka. Fox News oo qiimeyn ku sameysay hantida madaxweynayaashii soo maray Mareykanka ayaa Trump ku qiimeeyay madaxweynihii ugu hantida badnaa ee abid hogaamiya dalkaasi.
Madaxweyne Trump ayaa hanti badan iyo shirkadda dhismaha kala wareegay aabihii, waxaana uu ku sameeyay ballaarin. Trump ayaa huteello caalami ah ku leh magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka.
Madaxweyne John F. Kennedy
John F. Kennedy oo xilka madaxtinimada ee Mareykanka qabtay sanadkii 1961 ayaa waxaa uu xilkaas hayay ilaa iyo sanadkii 1963 markaasi oo toogasho lagu dilay.
Hantidiisa ayaa lagu qiyaasay hal bilyan oo dollar, waxaana uu asal ahaan kasoo jeeday qoys hanti leh. Aabihii waxaa uu mar kamid ahaa dadka ugu hantida badan Mareykanka.
Xaaskiisa Jacqueline Kennedy waxay ahayd haweeney dhaxal ahaan u heshay shirkaod shidaal oo ay lahaayeen qoyskooda. Hantida ay lahaayeen ayaa la sheegay inay kamid tahay wargeyska Wall Street iyo kuwa kale, waxaana madaxweyne Kennedy lagu qiimeeyay in uu ahaa madaxweynihii labaad ee ugu taajirsanaa madaxweynayaasha soo maray Mareykanka.
Madaxweyne George Washington
Madaxweyne George Washington oo ahaa madaxweynihii koowaad ee dalka Mareykanka ayaa xilka qabtay sanadkii 1789, waxaana uu ka degay sideed sano kadib.
Hantida madaxweyne George Washington ayaa lagu qiyaasay inay ahayd 525 milyan oo dollar.
Wargeyska The financial site ayaa kusoo warramay in madaxweyne George uu guryo aad u waaweyn uu ku lahaa buuraha Vernon, kuwaas oo ku fadhiyay dhul gaaraya kumanaan hektar. Musharkiisa ayaa la sheegay in xilligaas uu ahaa boqolkiiba laba miisaaniyadda guud ee Mareykanka sanadkii 1789.
Xaaskiisa Martha ayaa dhaxal ahaan u heshay hanti farabadan oo uu lahaa aabaheed.
Madaxweyne Thomas Jefferson
Thomas Jefferson oo xilka madaxtinimada Mareykanka qabtay sanadkii 1801, kana degay sanadkii 1809 ayaa Fox News waxay hantidiisa ku sheegtay inay gaareyso 212 milyan oo dollar.
Si lamid ah madaxweynihii isaga ka horreeyay, Jefferson waxaa uu ahaa nin ka ganacsada dhismaha dhulka iyo guryaha iyo dad uu adoonsan jiray oo uu uga tegay aabihii. Waxaa uu sidoo kale lahaa dhul loo dalxiis tago oo ku yaalla gobolka Virginia.
Inkasta oo madaxweyne Thomas Jefferson uu lahaa hanti dhan 212 milyan oo dollar ayaa haddana waxaa uu dhintay isagoo lagu leeyahay lacag deyn ah.
Madaxweyne Theodore Roosevelt
Madaxweyne Theodore Roosevelt o soo noqday madaxweynihii 26-aad ee dalka Mareykanka aya xilk qabtay 1901, waxaana hantidiisa lagu sheegay 125 milyan oo dollar. Waxa uu noqday madaxweynaha shanaad ee ugu hantida badan Mareykanka.